I-villa enephuli e-Pantòn, The Ribeira Sacra, Galicia, Spain. - I-Airbnb
I-villa enephuli e-Pantòn, The Ribeira Sacra, Galicia, Spain.
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Pedro izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Le ndlu enhle enamazinga amabili ahlanganisa:
Isitezi esiphansi esinefulethi elihlala abantu ngasese kanye negalaji lapho uzothola khona umshini wokuwasha.
Isitezi esingaphezulu, esinomnyango ohlukile wokungena sinehholo lokungena kanye nephasishi eliholela endaweni yokuhlala kanye namagumbi omphakathi: Ikhishi elizimele elinethala kanye netafula lokudlela le-6 Pax. elibheke eSigodini. Igumbi lokuhlala & yokudlela
Igumbi lokuhlala nelokudlela eline-settee, iSatellite TV kanye netafula le-6 Pax elibheke eSigodini kanye nezivini ezizungezile. Indlu yokugezela enkulu enobhavu neshawa. Igumbi lokulala elinethala kanye nombhede ophindwe kabili, owesi-2. Igumbi lokulala elinombhede omkhulu kanye ne-3rd. igumbi elinombhede omncane (120 cm. ububanzi)
I-Aguas Santas Golf Course kanye ne-4 star Hotel Spa iku-700 m. hamba. Indlu ibekwe endaweni enamagquma, izungezwe izivini futhi ibheke iValle de Lemos. Indawo ebiyelwe, inesivini esincane, ingadi yokuzijabulisa, ingadi, izihlahla zezithelo, idamu lokubhukuda nendawo yokupaka; uhlelo lokukhanyisa olucushiwe lusethwe emagumbini omane endlu.
Imisebenzi nezinto ezihehayo:
Lona umhlaba womdlali wegalofu kodwa kulabo abangakatholi ubuhle bomdlalo, i-Golf & Spa Resort inikeza amathuba amaningi okufeza izikhathi nemizwelo.
I-Ribeira Sacra, engahunyushwa ngokuthi "i-Sacred Shore". Izivini zitshalwe emithambekeni ewumqansa yezigodi nezihosha zemifula iMiño neSil. Indawo yathola isimo esisemthethweni se-Denominación de Origen ngo-1997, ikhiqiza i-Mencia ebomvu, i-Albariño ne-Godello.
ubusuku obungu-7 e- Follés
Itholakala engxenyeni engenhla yedolobhana lasePantón, lezi zindawo zizungezwe izivini futhi zingamamitha ayi-150 ukusuka endlini eseduze.
Ngaphakathi kwebanga lokuhamba kukhona isitolo sendawo, isonto, indawo yokudlela, i-spa, ihhotela kanye nenkundla yegalofu.
Umnikazi uhlala etholakala ngocingo ezivakashini zakhe, ngaphambi, phakathi nangemuva kokuhlala kwazo.
Ngemva kokubhuka, isivakashi sizothola ulwazi oluningiliziwe mayelana nendlu (impahla, izinsiza, okokusebenza kanye nendlela esebenza ngayo), mayelana nendawo (yokungcebeleka nezindawo ezithandwayo, izindawo zokudlela, izindawo zokudlela).
Ngemva kokubhuka, isivakashi sizothola ulwazi oluningiliziwe mayelana ne…